ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: နိုင်ငံ ၃၀ သို့G-Talk မှ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်နည်း
နိုင်ငံ ၃၀ သို့G-Talk မှ အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်နည်း
ဥပမာ: for UK, use 442071234567@talkster.gtal
k2voip.com or for USA , use 12125551212@talkster.gtalk2voip.com
့ local Talkster number တစ်ခုကို ရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. တကယ်လို့ တဘက်လူက ဖုန်းကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူစကားပြောဖို့ အားရဲ့လား ဆိုတာကို စစ်ဆေးဖို့ 10 secondsအချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
။ သူ့ကို ဖုန်းချပြီး သင့်အတွက် ရထားတဲ့ Talkster local phone number ကို ပြန်ခေါ်ခိုင်းပါ။
no catches, no limits, and no conditions! လို့ သူတို့က ဆိုထားပါကြောင်း။စိတ်မကောင်
းစွာဖြင့် ဒီlist ထဲမှာ စင်ကာပူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပါမလာပါဘူး ...
ဒီ service လေးကို သုံးဖို့ တဘက်လူမှ Caller ID ကိုဖွင့်ထားပေးဖို့လိုပါမယ်